"Airtel Jeunes Talents" : Hanonofy sahady an’i Londres i Luciano sy Arison
Na i Gabon aza no toerana handefasan’ny Airtel an’i Nomena Luciano Bernardin (12 taona) sy Arison Marie Claudine Ravoninjatovo (15 taona) dia efa manofinofy sahady an’i Londres izy ireo.
Hiainga amin’ny 20 oktobra ho avy izao, hiatrika fiofanana mandritra ny folo andro eo ho eo, ao amin’ny ivontoeran’ny Manchester United, izy mianadahy voafidy tamin’ny alalan’ny fifaninanana nokarakarain’ity orinasan-tserasera ity sy ny klioba Génération FC tamin’ny 26-28 septambra lasa teo tetsy amin’ny Esca Antanimena.
“Tanjonay ny hitady traikefa ary hampita izany amin’ireo namanay ao anatin’ny klioba nisy anay“, hoy ny hevitra nitovizan’izy ireo.
Hameno ny fandaharam-potoanan’izy ireo any Libreville ny fanazarantena maro, fanatsarana ny fahaizana baolina kitra, fitsapana teknika sy fahasalamana ary ny vaovao manokana ho an’ny baolina kitra eran-tany sy ny momba an’i Manchester United manokana.
Tao amin’ny ekipan’ny FC Viva no nisy an’i Luciano, izay nihintsana teo amin’ny dingan’ny manasa-dalana, raha tamin’ny ekipa niatrika ny famaranana (FC Zandrikely) kosa no nisy an’i Arison.“Nanomboka tany amin’ny di ngan’ny fifanintsanana no nitiliana ireo mpilalao maherin’ny 30 nofantenana , ka teknisianina maro sy sehatra hafa mpikirakira baolina kitra nanao fifantenana “, hoy i Andry Rasoanaivo, tompon’andraikitra teknika eo anvon’ny Génération FC.